MJBD Co., Ltd.
ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီအချက်အလက် အပြည့်အစုံကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် quality service များကို ပေးနေသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ ပြုလာရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
MJBD (Myanmar Japan Business Development) Website ကိုလာရောက် ကြည့်ရှုသည့် အတွက် ကျေးဇူး အထူးတင် ပါသည်။ လိုအပ်ချက်များ ရှိပါက အကြံပေးချက် များလည်း ပေးပို့ နိုင်ပါသည်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ နေ့ရက်လေး ဖြစ်ပါစေ။
“ဤနေရာတွင် android အတွက် ygn map installer ကို ရယူနိုင်ပါသည်။ ”
Website ဒီဇိုင်း နှင့် Website ရေးဆွဲခြင်း
လှပ ဆန်းသစ်သော website design များ၊ graphic design များကို customer စိတ်တိုင်းကျ ဆောင်ရွက် ပေးပါသည်။ အကောင်းဆုံး နည်းပညာများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့်အတူ customer လိုအပ်ချက်များ နှင့် ကိုက်ညီရန် အတွက် အကြံပေး ဆွေးနွေးမှုများ လည်း ပြုလုပ် ပေးပါသည်။
ဂျပန်စာ သင်တန်း များကို ဂျပန် တွင် ၁၀နှစ်ကျော် နေထိုင် ခဲ့ပြီး Nagoya University, Aichi University of Education, Nanzan University တို့ တွင် ပညာရေး နှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာ ခဲ့ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ ၏ Public School တွင် စာသင်ကြား ခဲ့ဖူးသော အတွေ့အကြုံ ရှိသူ မြန်မာလူမျိုး မှ ဦးစီး၍ သင်ကြား ပေးလျက် ရှိပါသည်။
ဂျပန်စာ သင်တန်းများကို ဂျပန်တွင် ၁၀နှစ်ကျော် နေထိုင်ခဲ့ပြီး Nagoya University, Aichi University of Education, Nanzan University တို့တွင် ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာခဲ့ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ၏ Public School တွင် သင်ကြားခဲ့ဖူးသော အတွေ့အကြုံရှိသူ မြန်မာလူမျိုးမှ ဦးစီး၍ သင်ကြားပေး လျက်ရှိပါသည်။
ဂျပန် လုပ်ငန်းများ နှင့် ကိုက်ညီသော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းသုံး ဂျပန်စာ သင်တန်း
ဂျပန် လုပ်ငန်းများ နှင့် မိတ်ဆက် ပေးခြင်း
အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေ ပေးခြင်း
ဂျပန်သို့ပညာတော် သင်လိုသူများအား အကြံဥာဏ် ပေးခြင်း၊ အကူအညီ ပေးခြင်း
ဂျပန်သို့ training စေလွှတ်ခြင်း၊ ပညာတော်သင် စေလွှတ်ခြင်းများ တွင် အကူအညီ ပေးခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံ မှ လုပ်ငန်းများ၊ ကျောင်းများအား လေ့လာရာ တွင် အကူအညီ ပေးခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံ ရာတွင် အကူအညီ ပေးခြင်း။ (မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ကုမ္ပဏီသစ် တည်ထောင် ရာတွင် လိုအပ်သော အကူအညီ များအား ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း။)
ရုံးခန်း ရှာဖွေ ပေးခြင်း
ဂျပန် စကား ပြောနိုင်သော ဝန်ထမ်းများ ရှာဖွေ ပေးခြင်း
မြန်မာ လုပ်ငန်း များအား သွားရောက် လေ့လာ ရာတွင် ဘာသာ ပြန်ပေးခြင်း၊ guide လုပ်ပေးခြင်း
ဝန်ထမ်း ရှာဖွေ ပေးခြင်း။ (သတင်းစာများ၊ လက်ကမ်း စာစောင်များ တွင် ကြော်ငြာ ပေးခြင်း၊ အင်တာဗျူး ပြုလုပ်ချိန် တွင် ဘာသာပြန် ပေးခြင်း။)
Software Development နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်ကုမ္ပဏီ တွင် လိုအပ်သော အရည်အချင်း နှင့်ပြည့်ဝသော ဝန်ထမ်းများ အား ရှာဖွေ ပေးပါသည်။
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းခန့်ဇော်ပါခင်ဗျာ။အခုအသက်20 ရှိပါပြီ။ ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) N2 အောင်မြင်ပြီးပါပြီခင်ဗျ။ ကျွန်တော်သည်အရင်ကတည်းက ဂျပန်စာ၊ ဂျပန်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေမှာလေးလေးနက်နက်ဝါသနာရှိပြီး ၊ တစ်နေ့မှာသေချာပေါက် ဂျပန်ကိုသွားမယ်လို့ စဉ်းစားထားပါတယ် ၊ အဲ့ဒါကြောင့် တက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ်မှာ စိတ်ပိုင်းဖြတ်၍ ကျောင်းနားလိုက်ပြီးတော့ ၊ ဂျပန်စာကိုတစိုက်မတ်မတ်စူးစိုက်ပြီး စတင်လေ့လာခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သာမန်မိသားစုရဲ့ဝင်ငွေနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ တက္ကသိုလ် မှာ ပညာသင်ကြားဖို့ဆိုတာ အထူးသဖြင့် ငွေကြေးကုန်ကျမှုဟာအရမ်းကိုခက်ခဲတယ်ဆိုတာကို နားလည်ခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ MJBD ရုံးခန်းမှာ ဂျပန်လူမျိုး ဆရာမ OKITA နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် ။ အရမ်း ကြင်နာတတ်တဲ့ဆရာမဖြစ်ပြီးတော့ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် နားလည်လွယ်စေရန် အမျိုးမျိုးသော သင်ကြားမှုပုံစံများဖြင့် ရှင်းပြ၍ ကျွန်တော်တို့၏ ပူပန်စိုးရိမ်မှုများကိုဖယ်ရှား ပေးခဲ့ပါတယ် ။ ဆရာမသည် ( ဂျပန်ကိုသွားပြီး ကျောင်းတက်နိုင်ဖို့အတွက် ပိုက်ဆံဆိုတာထက် ၊ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ကြိုးစားချင်တဲ့စိတ် မည်သူမဆိုကို ကြင်နာတဲ့နှလုံးသားက အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်တယ်လို့) အမြဲ ပြောလေ့ရှိပါတယ် ။ ပိုက်ဆံမရှိပဲနဲ့ ဂျပန်မှာကျောင်းတက်ဖို့ဆိုတာဟာ လွယ်ကူတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဂျပန်လူမျိုး ဆရာမ OKITA ကသေသေချာချာပြုလုပ်ပေးခဲ့သောအတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်သည် ဂျပန်သို့ ကျောင်းသွားတက်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ခင်ဗျ ။ ကျွန်တော်သည် MJBD Japanese Language School တွင်တက်နေစဉ်ခဏတာအတွင်း အခြားမြန်မာလူငယ်များကိုလဲ ဂျပန်စာသင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါက ကိုယ့်အတွက်ပိုပြီးတော့ အတွေ့အကြုံကောင်းတွေကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပိုက်ဆံမရှိလည်းပဲ ရိုးသားဖြောင့်မတ်၍ ကြိုးစားချင်စိတ်အပြည့်ရှိသော လူုငယ်များအနေဖြင့် MJBD Japanese Language School မှာ စာလေ့လာပြီး ဂျပန်ရဲ့ လူမှုဖူလုံရေး ရိပ်သာ ဌာန တွေမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်သင့်ပါတယ် လို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခဗျာ။
မင်္ဂလာပါရှင့် ကျွန်မကဆွေဇင်ထွန်းပါရှင့် အသက်က25နှစ်ဖြစ်ပါတယ် N2အောင်ထားပါတယ် ဂျပန်ကိုပညာတော်သင်သွားချင်တာကကျွန်မရဲ့အိပ်မက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျပန်ကိုသွားပြီးပညာသင်မယ်ဆိုရင်ပိုက်ဆံတွေအများကြီးကုန်ပါတယ်။သာမန်မိသားစုကမွေးဖွားလာတဲ့ကျွန်မအတွက်တော့လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။MJBDရဲ့ဆရာမOkitaနှင့်တွေ့ပြီးကျွန်မရဲ့အိပ်မက်ဟာအမှန်တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။MJBDကနေဂျပန်ကိုပညာတော်သင်သွားမယ်ဆိုရင်မြန်မာမှာပိုက်ဆံလုံးဝပြင်ဆင်စရာမလိုပဲပညာတော်သင်သွားနိုင်ပါတယ်။အခမဲ့ဂျပန်ကိုသွား နိုင်ရန်သတ်မှတ်ချက်နှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပန်းတိုင်ကိုဦးတည်ချက်ထားပြီး[ကြိုးစာချင်တဲ့စိတ်]နှင့်မြန်မာလူမျိုးတိုင်းမှာရှိတဲ့မိသားစုရယ်၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေရယ်ကိုတန်ဖိုးထားတတ်သော[ကြင်နာတက်သောနှလုံးသား]သာရှိမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်။ကျွန်မရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကအခုချိန်ကနေစမယ်ဆိုပေမဲ့,အနာဂတ်မှာဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်ပြီးလစာတွေလဲရနိုင်တော့မှာပါ။..
ဖြိုးဖြိုးထက်ဖြစ်ပါတယ်။၂၀၁၇နှစ် ၁၂လပိုင်း JLPT စာမေးပွဲမှာ N2 ကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ အမှတ်ကမှန်းထားတာထက်နည်းခဲ့ပေမဲ့လည်း အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲ စာလုပ်ပြီး အောင်ခဲ့တဲ့အတွက်အရမ်းကိုပျော်ရွှင်ကျေနပ်မိပါတယ်။ ဂျပန်ကာတွန်းကားတွေကိုကြည့်ရင်းကနေ စိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီး ဂျပန်စာကိုလေ့လာခဲ့တာ အခု၄နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ။ ဂျပန်စာguideစာသင်ဝိုင်းမှာ N3 အထိလေ့လာပြီး အဲဒီနောက် ၇လပိုင်းမှာ MJBD ဂျပန်စာသင်တန်းကျောင်းမှာ N2 ကိုတက်ခဲ့ပါတယ်။ သင်တန်းက တပတ်မှာတကြိမ်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ Sensei က Reference စာရွက်တွေပြုလုပ်ပြီးပေးတာတို့ နားမလည်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ အကြိမ်ကြိမ် ရှင်းပြပေးတာတို့ကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ သင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၇နှစ်အစမှာတော့ Grammar ပဲလေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ၇လပိုင်းမှာ MJBD က Okita Sensei နဲ့တွေ့ပြီး ဂျပန်စာကိုအောင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ Meaning တွေကိုပိုကျက်ပြီး နေ့တိုင်း စာလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အိမ်စာစာအုပ်မှာ Sensei ရေးပေးလိုက်တဲ့ စာတကြောင်းက ကျွန်မကိုမျှော်လင့်ချက် ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ Sensei ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် ကျျွန်မတို့ N2 အောင်ခဲ့ပါပြီ။ Sensei ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်။
ကွုန်မနာမည် ထားထားအောင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ၃လပိုင်းကစတင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ MJBD ရုံးမှာဂျပန်စာကိုသင်ကြားပေးနေပါတယ်။ ဂျပန်စာကိုကွုမ်းကွုမ်းကျင်တက်မြောက်နိင်ရန်အတွက်လာမဲ့ ၄လပိုင်းတွင် ဂီဖုခရိုင်မှာSubaru ရှိတဲ့ ဂျပန်စာကျောင်းမှာ ဂျပန်စာကိုသင်ယူပါမယ်။Subaru ကျောင်းတွင် ပညာသင်နေစဉ် ဂိဖုအစိုးရတက္ကသိုလ်တွင် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကို အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားပြင်ဆင်ပါမယ်။ အောင်မြင်ခဲ့ပါကဂျပန်စာတစ်မျိူးတည်းမဟုတ်ပဲ ဂျပန်ရဲ့သမိုင်း၊ စာပေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်း တို့ကိုလည်းလေ့လာပြီး၊ဂိဖုတွင်လည်းအမျိုးမျိုးသောအတွ့အကြုံများကိုလည်းရယူပါမည်၊နောင်လာမဲ့အနာဂတ်တွင်လည်း ဂျပန်-မြန်မာ ပေါင်းကူးဆက်သွယ်ပေးနိင်မဲ့လူတစ်ဦးဖြစ်နိင်ရန်အတွက်လည်းစိတ်ကူးထားပါတယ်၊အကယ်ရုျ်ကွုန်မ လိုမျိုး ဂျပန်မှာကျောင်းတက်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဂျပန်နဲ့ပတ်သတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားမူရှိခဲ့ပါက MJBD Japanese Language School သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိင်ပါတယ်ရှင့်။ MJBD နဲ့အတူအိမ်မက်တွေကို အကောင်ထည်ဖော်ကြစို့...။
လတ်တလော ကျွန်မ၏ဆန္ဒဖြစ်သည့် JLPT N3 ကိုအောင်မြင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ မြန်မာလူမျိုးတို့သည် ယေဘုယျအားဖြင့် စကားပြောနှင့် နားထောင်ရသည့်အပိုင်းတွင် အားနည်းကြသည်။ ကျွန်မလည်းပဲ ထိုအတိုင်းပင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ N3 မဖြေဆိုမမီအချိန်တွင်လည်း၎င်းအပိုင်းများကိုဖြေနိုင်ပါ့မလားဟုလဲ စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်မသည် စကားပြောပိုင်းတွင်လည်း ဂျပန်လူမျိုးများနှင့် စကားပြောဆိုရာတွင် စိတ်လှုပ်ရှားပြီး ဘာမှ မပြောနိုင်ခဲ့ပေ။ ထိုအချိန်တွင် ကိုလွင်အောင်မိုးက ဂျပန်လူမျိုးဆရာမ Ms Okita နှင့်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ဆရာမဆီတွင် ၃ လ စကားပြောနှင့် နားထောင်ရသည့်အပိုင်းကို သင်ယူခွင့်ရခဲ့သည်။ အဲဒီနောက်တွင်တဖြည်းဖြည်း ဂျပန်လူမျိုးများနှင့် စကားပြောနိုင်လာပြီး စာမေးပွဲတွင်လည်း အခက်အခဲမရှိဖြေဆိုနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဂျပန်စကားပြောဆိုနိုင်ဖို့ဆိုလှင် ဂျပန်လူမျိုးဆရာများထံတွင် သင်ယူမှသာ လျင်မြန်စွာပြောဆိုင်တတ်ကျွမ်းနိုင်သည်ဟုလဲ ထင်မိပါသည်။ ဂျပန်လူမျိုးများနှင့် ဂျပန်စကားကိုပြောမယ်ဆိုလျှင် စကားပြောနှင့် နားထောင်ရသည့်အပိုင်းတွင် တိုးတက်လာနိုင်သည်။ ဂျပန်လူမျိုးဆရာမ Ms Okita ထံမှ အမျိုးမျိုးသောကူညီစောင့်ရှောက်မှု များရရှိခဲ့သည့်အတွက် အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ သူမနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းသည်.. ကျွန်မ၏ဂျပန်စာအားနည်းချက်များပျောက်ဆုံးစေခဲ့သည့်အပြင် နောက်ထပ်အဆင့်မြင့်ပိုင်းသို့တက်လှမ်းနိုင်ရန် လမ်းစတွေ့ သကဲ့သို့ပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။
ကျွန်မရဲ့နာမည်ကတော့ဟန်ဇင်ဦးလို့ခေါ်ပါတယ်.ကျွန်မကတော့အခုjlptN3ကိုအောင်ထားပီဖြစ်ပါတယ်.ကျွန်မကအခုနှစ်၃လပိုင်း၂၆ရက်နေ့မှာဂျပန်ကိုပညာသင်ရန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်.ဒီMJBDကျောင်းလေးဟာဂျပန်မှာပညာသင်နိုင်ရန်အကူညီတွေအများကြီးပေးပါတယ်.ထို့ကြောင့်အားလုံးပဲယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ဂျပန်မှာပညာသင်နိုင်ပါတယ်နော်.ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၃နှစ်ခန့်ပညာသင်ကြားပီးသောအခါတွင်၅နှစ်သို့မဟုတ်နှစ်များစွာအလုပ်လုပ်ပီးမိသားစုထံပိုက်ဆံပို့နိုင်မာ ဖြစ်ပါတယ်.ဂျပန်လူမျိုးများနှင့်ရင်ဘောင်တန်း၍ လစာများကိုရယူပြီးမိဘများထံသို့ပို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.အာလုံးပဲလက်မလွှတ်သင့်သောအခွင့်အရေးဖြစ် သောကြောင့်အသေးစိတ်သိရှိလိုလျှင်ဒီMJBD ကျောင်းသို့လာရောက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါ တယ်ရှင်.
အားလုံးဘဲ မင်္ဂလာပါရှင့် ကျွန်မရဲ့ နာမည်ကတော့ အိဖြူအောင်ပါရှင့် ။ ကျွန်မ 2017 ခုနှစ် 12 လပိုင်းမှာ ဂျပန်အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ N3 level ကို အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ရှင့်။ ကျွန်မ ဂျပန်စာဟN4level ကို အောင်မြင်ခဲ့ပြီး နောက်မှာ MJBD ဂျပန်စာသင်ကျေင်းနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ဂျပန်စာကို ဆက်လက်သင်ယူခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာ MJBDဂျပန်စာသင်ကျောင်းမှာ ဂျပန်စာတော်တဲ့ သူဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံကနေ ပိုက်ဆံ ကုန်ကျခံ ပြင်ဆင်စရာမလိုဘဲ ဂျပန်သို့ သွားရောက်နိုင်သည့်အပြင် ဂျပန်စာပါ ဆက်လက်သင်ကြားခွင့် ရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေး ရှိတာကို သိခဲ့ရပါတယ်ရှင့် ။ သေချာပေါက် မြန်မာမှာဖြစ်ဖြစ် ဂျပန်မှာဖြစ်ဖြစ် ဂျပန်သွားဖို့ စာရွက်စာတမ်း အမျိုးမျိုး ပြင်ဆင်စရာရှိပေမဲ့ အဲဒါတွေအားလုံးကို MJBD ဂျပန်စာသင်ကျောင်းကနေဘဲ ကျွန်မတို့ အစား ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ရှင့်။ အဲဒီကျေးဇူးကြောင့် ကျွန်မဟာ 2018 ခုနှစ်3လပိုင်း 26 ရက်နေ့မှာ ဂျပန်သို့ သွားရောက်ပြီး ဂျပန်စာသင်ယူဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ရှင့် ဒါ့အပြင် ဂျပန်စာသင်ယူပြီး နောက်မှာလည်း တက္ကလိုလ်မှာ သူနာပြုအတတ်ပညာနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဘာသာရပ်ကို ဆက်လက်သင်ယူဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ရှင့်။ လူကြီးမင်းများ အားလုံးလည်း ဂျပန်သို့ သွားရောက်ပြီး ပညာသင်ယူချင် စိတ်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် MJBD နဲ့ ဆက်သွားဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။ MJBD ကျောင်းမှ ဆရာမကလည်း ကျွမတို့အတွက် ဂျပန်စာ တစ်ခုတည်းသာမက ဂျပန်နှင့် ပတ်သက်သော အမျိုးမျိုး သော အကြောင်းအရာတွေကို သင်ပြပေးပါတယ်ရှင့်။ ဒါကြောင့်မို့ ဘာမှ စိတ်မပူဘဲ ပထမဆုံး MJBD ကျောင်းနဲ့တိုင်ပင်ကြည့်ပါရှင့် ပြီးတော့လူကြီးမင်းများရဲ့ အိမ်မက်ကိုလည်း အကောင်းအထည်ကာင်အထည်ဖော်နိုင်ကြပါစေရှင့်။
Myanmar International Student Cherry Blossom
On March 27, five international students Tata, Aung, Han, Su, and Kang arrived at Nagoya International Airport successfully. Based on the welcome of the facility and university staff, I went to Chubu Gakuin University withaschool bus prepared at the university and gotalunch at the university cafeteria, but I heard that he did not eat most in-flight meals of Vietnam Airlines, Even being tired, it was enough to leaveaJapanese lunch boxed lunch.
In the afternoon at the Gifu City Hall, we were crowded at the end of the fiscal year, but somehow we finished registering the residents and finished joining the National Health Insurance. Then I visited Ina waves shrine in Gifu city which is alsoacherry blossoming spot with their feet, and reported to Japan gods under the cherry blossoms trees in full bloom. And on the evening of that day, I hadadinner party at the house at the house, finally got tension and smiles seemed to come out.
On March 28, I first boughtamarket forabicycle, while finishing various items, eventually I boughtanew car of the same type at the home center, it was already in the evening that the West had already got, We went cycling for Yamadera seeking cherry blossoms. Just then at the mountain temple the sound of the bell ringing 'Gone' sounded, so I hurriedly went to the mountain bicycle and went to the temple to experienceabell-throwing experience. And, asathank you to Mr. Kazuyasu of the temple, we showed the children's song 'Evening glow small burn' just practicing. Among the lyrics is there isacrimson saying 'The sunset is glowing withasunset glow, the bell of the temple of the mountain becomes ...' as if the coincidence which they themselves overlap, Buddhist youths and Japanese priests met under the cherry blossoms of the mountain temple, it was likeamovie scene.
On March 29th, I went toatour of Tsubaki No Yuen and Sakurami Dorm in the elderly home where I take care of, and I finished the contract with the facility. It was possible to realize this study abroad only with the support of the facility. The director at the top of the facility gave us the encouragement word that we are hoping for international students in Myanmar as facilities. The facility was in the mountains, but the cherry blossoms were in full bloom everywhere, with cherry blossoms snowing in the cherry blossoms and some cherry blossoms that welcomed the students. While observing inside the facility, students showed the Japanese popular song 'Let's walk upward' that we practiced on the previous night together in front of the elderly people in the facility, Together with his pant, when I finished singing, I got big applause and cheers.
On March 30, I went to greet the house near my dormitory. Each person handed out Myanmar tea of ​​souvenir brought to Japan withagreeting word learned in Myanmar according to the textbook in Myanmar as 'It is boring ... (@ ^ ▽ ^ @)'. Some of the visiting houses returned students with spinach and broccoli harvested at their own home. It looked very fresh and tasty, so I seemed to have eaten the vegetables that I had for that evening meal in Myanmar. Because Japanese vegetables are very expensive compared to Myanmar, it is very helpful to students who are struggling.
On March 31, in the morning I went to volunteer atachild student after school day service facility. I took karuta with my Japanese children, made frying and eating and had fun. From daytime I went to the Kannon of the beautiful cherry blossoms and the main hall, climbedalittle on the mountain and enjoyed the cherry blossoms tour.
On April 1st, everyone participated in the Spring Festival in the area. We gathered atanearby shrine at 8 o'clock, and at the departure of the shrine, we introduced students to local residents from the self-governing president. The festival was very exciting as young young people from Myanmar participated. Four women carry kids mikoshi, Kang joined the adult shrine and toured the area for about2hours. At lunchtime, there wasafestival launch dinner under the cherry blossom trees at the community hall in the area, I took part in Longzi and took part. Again, we showed Japanese songs 'Sunset small burn' and 'Let's walk up and walk'. Since they were singing the lyrics perfectly in just5days after coming to Japan, the people in the area were also surprised, but many Japanese young people and children do not know this song, many young people in Myanmar A wonderful feeling towards our lives in Japan has been conveyed. From my point of view, I will go to college elderly people in the community 'The day they will care for you' or 'They will work part-time and live on their own, if they have enough vegetables, they Please cheer for 'Please do it inasharp ask. International students receivedabig welcome from the cherry blossoms in full bloom in Japan and local people in the last6days.
(Report MJBD Japanese side school leader Japanese supporter, Mr. Kazunaga Okita)
မြန်မာနိုင်ငံသည် အလွန်တရာမှ အံဩလောက်အောင် ထူးခြားသော နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့် နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံ ကဲ့သို့ သဘာ၀ သယံဇာတ ပေါများ ကြွယ်၀ခြင်း မရှိပါ။ ထို့အပြင် နောင်တစ်ချိန်တွင် အာရှတွင် အကောင်းဆုံး နေရာ ဖြစ်လာရန် အလားအလာ ရှိသည်ဟု ကမ္ဘာအနှံရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတို့ မှတ်ယူထားသော မြန်မာနိုင်ငံ သည် အရှေ့ နှင့် အနောက် နိုင်ငံများ၊ အာရှ နှင့် အာဆီယံ နိုင်ငံများ ကြားတွင် ကူးသန်း ဆက်သွယ် နိုင်သော ပေါင်းကူး တံတား အသွင် တည်ရှိခြင်းကြောင့် ယခုနှစ် အတော အတွင်းတွင် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမည့် သူတို့ ၏ စိတ်ဝင်စားမှု ကို အဖမ်းစားနိုင်ဆုံး နေရာ ဖြစ်လာ ပါသည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံခြားသား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ သည် မြန်မာနိုင်ငံ သည် စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ် များစွာ ပေးစွမ်း နိုင်မည်ဟု လက်ခံလာ ကြပါသည်။
ယနေ့ ခေတ်အခါတွင် ကမ္ဘာ အရပ်ရပ်တွင် ရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် အဖွဲ့အစည်း များသည် မြန်မာနိုင်ငံ တွင် အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ကမ္ဘာအရပ်ရပ် သို့ စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်း ဖွင့်ပေးသည့် စနစ် ကျင့်သုံး လာသည်ကို တွေ့မြင် လာကြပါသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ သည် ကဏ္ဍအသီးသီး တွင် တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးမှု ဆောင်ရွက်ရန် ကျန်ရှိ နေသေးသော ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်သောကြောင့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမည့် သူများ အတွက် အလွန် ကြီးမားသော ဈေးကွက် တစ်ခု အဖြစ် ပေါ်ပေါက် လာသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ သည် ထိုအခွင့်အလမ်း များကြောင့် ယခု လက်ရှိ အချိန်တွင် ကမ္ဘာပေါ် တွင် ရင်းနှီး မြုွပ်နှံမှု ပြုရန် အကောင်းဆုံး နေရာ ဖြစ်လာ ပါသည်။
ထို့ကြောင့် အခြားသော နိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ် ကြည့်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ပိုမိုပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သင့်သည့် အကြောင်း ကို နိုင်ငံခြားမှ စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်များ နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် သူများ သိရန် ပြောပြ လိုပါသည်။
တိုးတက် ပြောင်းလဲ လာသော ခေတ်သစ် မြန်မာ နိုင်ငံတော်ကြီး တွင် ဤ အကောင်းဆုံး အခွင့်အရေးကို လက်လွတ် မခံပဲ အမိအရ ဆုပ်ကိုင်၍ စတင် အကောင်အထည် ဖော်ကြည့် ကြပါစို့။
အမှတ်၁၄၇၊ သုံးလွှာ ၄၅ လမ်း၊ အနော်ရထာလမ်း ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်
မနက် ၈:၃၀ - ညနေ ၁၇:၀၀
စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ပိတ်သည်
Facebook from MJBD
Copyright © MJBD. 2016